को प्रस्ताव छ, रूसी अनुसार को भाषा एकाइ यसको व्याकरण, सामान्यतया पूरा कथन पारस्परिक रहेको छ। यो एक न्यूनतम लम्बाइ पाठ हो जो एक अलग सन्देश, रूपमा कार्य गर्न सक्षम छ।
प्रस्तावको एक रैखिक फैशन वा रूसी भाषा को व्याकरण द्वारा प्रदान morphological प्रकारका देखा एक वा बढी शब्दहरू मिलेर बनेको छ।
को प्रस्ताव को संरचना विन्यास को विषय छ, र आफ्नो मुख्य विशिष्ठ सुविधा - एक predicativity वा संचार लागि उपयुक्त छ र एक अस्थायी वा सर्वसाधारण actualization व्यक्त जो एक व्याकरण एकाइ, हुन सक्ने क्षमता। "झर्ने तारा" र "झर्ने तारा" - उदाहरणका, "एक पाकेको स्याउ" र "पाकेको स्याउ" को लागि।
जस्तै समन्वय, नियन्त्रण र निकटता रूपमा - एक वाक्यमा शब्द र syntactical समूह बीच संचार धेरै syntactical तंत्र द्वारा व्यक्त गरिएको छ।
ठूलो र शक्तिशाली रूसी भाषा, त्यहाँ वाक्य विभिन्न प्रकारका छन्। वास्तविकता गर्न सम्बन्ध को प्रकृति आधारित, तिनीहरूलाई मा व्यक्त वास्तविक र काल्पनिक सर्वसाधारण प्रस्ताव को विशिष्ट विशेषज्ञहरु, सर्वसाधारण मान विभिन्न रंग संग।
तिनीहरूले अवस्थित यदि वाक्य को प्रकार, सकारात्मक वा नकारात्मक छन्, वा त्यहाँ वास्तविक संसारमा वस्तुहरू र तिनीहरूको परिभाषा बीच कुनै जडान छैन।
Declarative, interrogative र imperative जो भिन्न ती प्रस्ताव, हो उद्देश्य बयान, साथै यी उद्देश्य intonations को सम्बन्ध मा रूपमा।
यी तीन उपसमूहहरु सम्बन्धित भनेर प्रस्ताव केही प्रकार उद्गार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई भावनात्मक सम्बन्धित रंग विशेष उद्गार intonations मा व्यक्त जुन थप्दा जब यो उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
आपूर्ति संरचना को विशेषताहरु सामान्यतया यसको विभिन्न सुविधाहरू खातामा, निर्माण गरिएको छ। केही वा एक - उदाहरणका लागि, एक प्रस्ताव जटिल वा सरल, predicate एकाइहरूको संख्या आधारमा हुन सक्छ।
बारी मा सरल "सुसंगत भाषण एकाइ", विभाजित छन् एक-टुक्रा प्रस्ताव, मुख्य सदस्य मा निदान गर्दै प्रकार जो, र दुई-भाग, वा दुई प्रमुख आयोजन केन्द्र छ भनेर ती।
जटिल वाक्य अप कम्तिमा दुई गरिन्छ र कहिलेकाहीं थप टुक्रा एक पुरा स्वरको आरोह अवरोह र अर्थ मा जडान गरिएका हुन्छन्। संरचना यी भागहरु - मुख्य रूप यसको संरचना राखन प्रस्ताव को सरल प्रकार, एक जटिल रूपमा जडान जो छन्,। तथापि, तिनीहरूले अर्थ र पूर्णता को finality को टोन गर्न बन्द।
परिसर संघ प्रस्ताव - संचार विधि यूनियन र संबद्ध शब्दहरू प्रयोग भने, हामी हाम्रो अघि छ। र भागहरु अर्थ र टोन जडित छ भने, यो एक हो conjunctionless प्रस्ताव।
प्रकार जटिल वाक्य को संचार को आफ्नो माध्यम अधीनस्थ कुनै कारणको लागि एकजुट भएको समुह शब्दहरू वा यूनियन छन् भन्ने तथ्यलाई द्वारा निर्धारित छन्।
एक-टुक्रा वा दुई-भाग प्रस्ताव यदि उनि वाक्य संरचना सबै आवश्यक सर्तहरू समावेश पूरा हुनेछ। त्यसको विपरीत, तिनीहरू जहाँ यो वाक्य संरचना केही, वा एक सदस्य हटाइएका छ मामला मा अपूर्ण हुनेछ, तर यो सजिलै सन्दर्भमा पुनर्स्थापित भएको छ।
माध्यमिक सदस्यहरूको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले द्वारा निर्धारित साधारण र गैर-proliferation रूपमा प्रस्ताव यी प्रकार।
डिजाइन व्याकरण र stylistic को समारोह कार्य जो महत्वपूर्ण भूमिका स्वरको आरोह अवरोह द्वारा खेले, प्रदान गर्दछ। यसलाई सिर्जना कुनै पनि प्रस्ताव को पूर्णता छ प्रयोग गरेर syntactic एकाइहरु यसको विभाजन, साथै बोलीको व्यक्त भावना, उनको बलियो-इरादों मनसाय, सर्वसाधारण मान विभिन्न रंग गरे।
Demoralization - यो ... "demoralization" को अर्थ
पाठमा संचार प्रस्ताव को प्रकार। प्रस्तावित पाठ बीच उपकरण र संचार को प्रकारका
Crocheting को लामो इतिहास
"बेल्टको लागि बन्द": वाक्यांश र यसको प्रयोगका उदाहरणहरूको अर्थ
भेला सूचना - साझेदार कम्पनीहरु जाँच
प्यूजिओट 3008, समीक्षा र सुविधाहरू
डायोड 1N4007 - उच्च-शक्ति rectifier पुल निर्माण लागि आदर्श उपकरण
विशेषताहरु एक केक-पप: व्यञ्जनहरु, संरचना र समीक्षा
Multivarka "पोलरिस" मा पकौडी कसरी खाना पकाउनु?
खीरे बीम: प्रजातिहरू र आफ्नो वर्णन। ककडी बीम को खेती को सुविधाहरू
महिला लागि जाडो जूता। महिला जूता लगाउन के बाट? सुशील महिला जूता को फोटो
बफर समाधान: तयारी र प्रयोग